कोरोना कहर : काठमाडौँका अस्पतालको यस्तो छ अवस्था
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यकोरोना कहर : काठमाडौँका अस्पतालको यस्तो छ अवस्था
यतिबेला नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । काठमाडौँसँगै देशका विभिन्न अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटर भरिइसकेका समाचार आइरहेका छन् ।
यही गतिमा सङ्क्रमण फैलिए देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँका कतिपय अस्पतालले बिरामी उपचार गर्न नसक्ने भएर सङ्क्रमितहरू घरमै आइसोलेसन र अक्सिजनको भरमा बस्न थालिसकेका छन् ।
अहिले देशभरका अस्पतालमा एक हजार दुई सय ४९ आइसियु र पाँच सय २६ भेन्टिलेटरसहितका बेड छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्मको आँकडाअनुसार ५४ हजार ४१ जना आइसोलेसनमा र क्वारेन्टाइनमा दुई सय १२ जना छन् ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाका कोभिड अस्पतालका बेड भरिन थालिसकेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।
जनताले यसरी नै लापरबाही गर्दै जाने हो भने यसले विकराल रूप लिँदै जाने निश्चित छ । सर्वसाधारणमा यसबारे चेतनाको विकास हुनु जरुरी रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्ले बताउँछन् ।
‘कोरोना सङ्क्रमित बिरामीले अस्पतालहरू भरिन थालिसके । तर पनि कोभिड अस्पताल र मानिसमा गम्भीरता देखिएन,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा छुट्याइएका कोभिड अस्पतालमा बेड पाउन सक्ने अवस्था नभएको डाक्टरहरू बताउँछन् ।
कुन अस्पतालमा कति छन् आइसियु र भेन्टिलेटर ?
वीर अस्पतालले ७६ बेडको आइसोलेसन वार्ड, १० बेड आइसियु र पाँच वटा भेन्टिलेटर कोरोना सङ्क्रमितका लागि छुट्याएको छ । जसमध्ये आइसोलेसनमा ७८ जना, आइसियुमा सात जना र भेन्टिलेटरमा एक जनाको उपचार भइरहेको अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. अच्युत कार्कीले जानकारी दिए ।
सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल
बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा एक सय २० बेडको आइसोलेसन, २० आइसियु र आठ वटा भेन्टिलेटर छन् । यहाँ आइसोलेसनको क्षमताभन्दा बढी सङ्क्रमित छन् । एक सय २० जना क्षमताको आइसोलेसनमा एक सय ६६ जना रहेको डा. प्रविन नेपालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अस्पतालमा अहिले आइसियुमा १२ जना र भेन्टिलेटरमा ६ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितका लागि २० आइसियु र ११ वटा भेन्टिलेटर रहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बाँस्तोलाले जानकारी दिए । जसमध्ये ६६ जना आइसोलेसन, नौ जना आइसियु र ११ जना सङ्क्रमित भेन्टिलेटरमा छन् ।
त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
महाराजगन्जस्थित त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालले कोभिड सङ्क्रमितको उपचारका लागि एक सय ३० आइसोलेसन बेड, २४ बेड आइसियु, ५० बेड एचडियु र २० बेड भेन्टिलेटर छुट्याएको छ ।
उक्त अस्पतालमा हाल आइसोलेसनमा एक सय ५३ जना, आइसियुमा ३५ जना र भेन्टिलेटरमा सात जना कोरोना सङ्क्रमित उपचाररत छन् ।
निजामती कर्मचारी अस्पताल, काठमाडौं
निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) मा ५० बेड क्षमताको आइसोलेसन, १४ बेडको आइसियु र ६ बेडको भेन्टिलेटर छुट्याइएको कोभिड संयोजक ज्वाला ढकालले जानकारी दिइन् ।
यस अस्पतालमा हाल १४ जना कोरोना सङ्क्रमित आइसियुमा छन् भने भेन्टिलेटरमा अहिले बिरामी नभएको उनले बताइन् ।
भक्तपुर अस्पतालमा ६८ आइसोलेसन बेड, ६ आइसियु र ६ भेन्टिलेटरको क्षमता छ । यस अस्पतालको आइसोलेसनमा २७ जना, आइसियुमा चार जना र भेन्टिलेटरमा दुई जनाको उपचार भइरहेको कोभिड संयोजक डाक्टर सुमित्रा गौतमले जानकारी दिइन् ।
नेपाल प्रहरी अस्पतालले कोभिड सङ्क्रमितको उपचारका लागि आइसियुसहितको भेन्टिलेटर बेड २० वटा, एचडियु बेड ३९ वटा र आइसोलेसन बेड एक सय ३२ वटा छुट्याएको अस्पतालका प्रवक्ता रामकृष्णराज भण्डारीले जानकारी दिए ।
जसमा सोमबारसम्म एक सय २१ जना आइसोलेसन, आठ जना आइसियुमा उपचाररत छन् । भेन्टिलेटरमा भने हालसम्म सङ्क्रमित नरहेको उनले बताए ।
ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि तीन सय आइसोलेसन, २६ बेड आइसियु र १७ बेड भेन्टिलेटर छुट्याएको अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले जानकारी दिए ।
अस्पतालमा हाल ९० जना आइसोलेसनमा छन् भने नौ जना आइसियु र नौ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको कोभिड संयोजक डा. आशीष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
वीरेन्द्र अस्पताल, छाउनी
वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीको आइसोलेसनमा ७१, आइसियुमा ५ जना कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
निजी क्षेत्रको अस्पताल ग्रान्डीको कोभिड जेनरल वार्डको आइसोलेसनमा २६ जना, आइसियुमा ६ जना उपचाररत रहेको अस्पलालले जनाएको छ ।
यसैगरी, ह्याम्स अस्पतालमा ८२ जना आइसोलेसन, १८ जना आइसियु र पाँच जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् ।
यता, नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा ४९ जना आइसोलेसन, २६ जना आइसियु र ६ जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन् ।
सोमबारसम्म सानेपास्थित स्टार अस्पतालमा २५ जना आइसोलेसनमा, पाँच जना आइसियु र एक जना कोरोना सङ्क्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स तथा आइसियु बेडको उपलब्धताका लागि हटलाइन नम्बर ११३३ सँगै उल्लेखित अस्पतालको नम्बर समेत प्रदान गरेको छ ।
अस्पताल काठमाडाैँ उपत्यका काेराेना